Maxey tahay sababta Baarlaamanka Federalka ula degdegayo Sharciga Batroolka? – Somali Top News
Labaduba waxay ugu yaraan uga sii dari karaan xiriirka mugdigu soo galay ee nagala dhexeeya dalka aan jaarka iyo saaxiibkaba nahay ee Kenya.
Waxaa xusuusin mudan ee aagga badda aan ku muransan nahay iyo dhulka ku beegan ay hadda ilaaliyaan ciidanka Kenya oo dhinacna ka tirsan AMISOM.
Annagu hore ayaan u soo gacanqabannay Kenya, oo waxaa Muqdisho Qaxooti ahaan loogu marti geliyay halgamayaal kikuyu ah oo gumeysi la-dirir iyo xornimo-doon ah. Maantana muhiim ayaan u nahay Kenya.
← Axmad Madoobe oo cadaadis dhan walba ah ku haya Musharaxiinta la tartameysa
Xildhibaanada Golaha Shacabka oo ansixiyay sharciga Batroolka →
Ra’isul Wasaare Kheyre oo daahfuray mashruuca dhismaha wadooyinka Jowhar iyo Afgooye
Al shabaab oo isaga baxay dagmada Xarardheere ee gobalka Mudug